दैलेख नेकपाको एकताले, पायो पूर्णता – मातृभूमी
मातृभूमी संवाददाता । ५ कार्तिक दैलेख
नेकपा दैलेखले जिल्लादेखि वडा तहसम्मको एकता पूरा गरेको छ । जिल्लाका ९० वटै वडामा समेत एकता प्रक्रिया टुंगिएको नेकपा दैलेखले जनाएको छ । केन्द्र र प्रदेश सभाको निर्वाचन समन्वय कमिटीको अध्यक्ष र सचिव, नगर तथा गाउँपालिकाका पार्टी पदाधिकारी, पालिकास्तरसम्मका इन्चार्ज–सह–इन्चार्ज अध्यक्ष र सचिवसँगै ९० वटै वडाका इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुंगो एकमुष्ट रूपमा लगाएको नेकपा दैलेखले जनाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा दैलेखले एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका जिल्लासचिव प्रेम कटुवालले पार्टीको नीति र विधिअनुसार जिल्लादेखि वडातहसम्मको एकता पूरा भएको जानकारी दिए ।
यी हुन् अध्यक्ष र इन्चार्ज
दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को अध्यक्षमा तेजबहादुर चन्द, सचिव ललिता रेग्मी चयन भएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा कुमार विक्रम शाही अध्यक्ष र उपेन्द्रकुमार रावत सचिवमा चयन भएका छन् । क्षेत्र नं. १ (क) मा अध्यक्ष कर्णबहादुर खड्का, सचिव पद्मा शाही, (ख) मा अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्द, सचिव लीलबहादुर राम्जाली चयन भएका छन् । त्यसैगरी, क्षेत्र नं. २ (क) मा अध्यक्ष गंगाराम दाहाल सचिव ऐनबहादुर कठायत, (ख) मा अध्यक्ष बखतबहादुर भण्डारी र सचिव अमरबहादुर माझी चयन भएका छन् ।
नारायण नगरपालिकाको इन्चार्जमा ताराकेशर धमला, सह–इन्चार्ज तप्ताकुमारी थापा, अध्यक्षमा लोमन शर्मा सचिवमा नन्दाराम रेग्मी चयन भएका छन् । जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि टुंगो लगाइएको नेकपा दैलेखका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद रवीन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए ।
यसरी गरियो भागबन्डा
जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ स्थानीय तह पूर्व माओवादी र ६ वटा स्थानीय तह पूर्व एमालेवीच बाँडफाँड गरिएको छ । अध्यक्ष शर्माले एकता प्रक्रिया टुंगिएसँगै पार्टीको नाममा यो वा त्यो गुटका नाममा खुद्रा व्यापार गर्दै हिँड्ने समय सकिएको दाबी गरे ।